विद्यार्थीका हातमा कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ ? - Chandragiri News
Home शिक्षा विद्यार्थीका हातमा कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ ?
२०७९, ७ जेष्ठ शनिबार १२:०९
काठमाडौँ, ७ जेठ । नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भए पनि विद्यार्थीका हातमा कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । स्कुल गएको पहिलो दिन नै पुस्तक पाइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म विद्यार्थी पुस्तकविहीन छन् । सरकारी र निजी दुवैतर्फबाट उहिल्यै छापिनुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै छापिएका छैनन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यस्तो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Previous articleनगर प्रमुख घनश्याम गिरीद्वारा पदभार ग्रहण, निबर्तमान उप प्रमुख लिशा नकर्मीको बिदाई
Next articleचन्द्रागिरिमा वडाध्यक्ष भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर विजय भएका वडा सदस्यहरु (नाम्मवाली सहित)